Vona Park Otopark Alanı Hizmete Hazır | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ52 ကြည်းတပ်Vona ပန်းခြံရပ်နားရန်နေရာ
15 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 52 ကြည်းတပ်, အထွေထွေ, ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, တူရကီ 0
ရရှိနိုင် vona ယာဉ်ရပ်နားယာဉ်ရပ်နားareaရိယာ
Persembe ရှိ Ordu Metropolitan Municipality မှဆောင်ရွက်သော Vona Park Landscaping Project ülenတွင် 188 ကားရပ်နားရန်ကတ္တရာခင်းခြင်းလုပ်ငန်းပြီးဆုံးခဲ့သည်။
ကတ္တရာနှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစီမံကိန်းတိုးတက်မှုနှင့်အတူကြာသပတေးနေ့တွင်ကားရပ်နားရန်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်ခရိုင်အတွင်းစတုရန်းအသစ်နှင့်လူမှုလူနေမှုနေရာများကိုထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်။
12 bin 600 m2 သည် Vona Park Landscape Project ကိုဒေသတွင်းတွင်အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်သည်။ ကြာသပတေးနေ့ကမ်းခြေရှိ 188 ကားရပ်နားရာနေရာ၊ စားသောက်ဆိုင်၊ သစ်သားကစားကွင်း၊ အထောက်အပံ့အစီအစဉ်၊ အပန်းဖြေနေရာနှင့်အပန်းဖြေနေရာများ၊2bin 668 m2 ကြမ်းပြင်လမ်းလျှောက်သူ၊ m5 ကတ္တရာ၊ စိမ်းလန်းသောmရိယာတွင် 900 ထောင်နှင့်ချီသော m2 ပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားသည်။
မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းကဤလေ့လာမှုကိုခရိုင်၏အရေးပါသောလူမှုရေးဆိုင်ရာအားဖြည့်နေရာအဖြစ်ထားရှိမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Mehmet Hilmi Gülerက“ ကျနော်တို့ကြာသာပတေးနေ့ကမ်းခြေကိုတက်ကြွလာအောင်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့စီမံကိန်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကသူတို့နေတဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာနေနိုင်တဲ့လူမှုရေးဘ ၀ နေထိုင်မှုhaveရိယာကိုရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော6bin 300 m2 ကားရပ်နားခြင်းသည်ခရိုင်အတွင်းရှိကားရပ်နားရန်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းလိမ့်မည်။ ပိုပြီးလှပပြီးစိမ်းလန်းစိုပြေသောစစ်တပ်တည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းမှုများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Landscaping, မြို့ရိုး, andesite အပေါ်ယံပိုင်း, site ကိုကွန်ကရစ်, ပန်းခြံများ, အားကစားနယ်ပယ်လမ်းများ, ကားပါကင်နှင့်အလင်းရောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း built ပါလိမ့်မည် 11 / 08 / 2015 ပန်းခြံ၊ ပန်းခြံ၊ အားကစားကွင်း၊ လမ်း၊ ကားရပ်နားခြင်းနှင့်အလင်းရောင်ပေးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ဒေသဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးညွှန်ကြားမှု TCDD4တိုင်းဒေသကြီး ဦး စီးဌာန…
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လုပ်ငန်းခွင်စီမံကိန်းအစီရင်ခံစာ (Addendum) ၏စီစဉ်ထား UIP နှင့်အဘိတ်အဖြစ်ဧရိယာပါဝင်အတွက်ပုံGündüzbeyဘူတာဧရိယာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများအတွက်တူရကီပြည်နယ်ရထားလမ်းတွင် Bilecik Bozüyük 21 / 11 / 2012 GündüzbeyဘူတာAreaရိယာ (Addendum) အပါအ ၀ င် Bilecik ၏Bozüyükခရိုင်ရှိ TCDD ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာasရိယာအဖြစ် TCDD ထောက်ပံ့ရေးစင်တာအဖြစ်စီစဉ်ခြင်းဖြင့် UCD ၏အစီအစဉ်နှင့်စီမံကိန်းအစီရင်ခံစာများခန့်မှန်းခြေ 38.7 LINE
ပန်းခြံများ Pass ကိုနီးပါး Living Space ကိုဟု 30 / 07 / 2018 İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay’da yaptığı 8 katlı otopark, Eylül ayında hizmete alınacak. Çatısındaki oturma alanları, havuzu ve seyir terası ile bölgede yaşayanlar için keyifli bir dinlenme yeri olacak 429 araçlık…
Bursa Gürsuနယူး Market ကအာကာသနှင့်ကားရပ်ရန်ကြွလာ 20 / 03 / 2019 Bursa’da makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Gürsu eski Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız’ın 2014 seçim vaatleri arasında yer alan otopark ve pazar alanı projesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor. Bursa…
ပြဿနာများဖြေရှင်းမှဒုတိယ Ormanian Park မှာယာဉ်ရပ်နား 30 / 08 / 2019 သဘာဝပတ် ၀ န်းကျင်ဥယျာဉ်သည်အိမ်နီးချင်း Kocaeli နှင့်ပြည်ပမှ guests ည့်သည်များကိုလက်ခံကြိုဆိုပြီးစိတ်ဖိစီးမှုမှကင်းဝေးပြီးသဘာဝတွင်အချိန်ဖြုန်းလိုသူများအတွက်အလွန်စိတ် ၀ င်စားသည်။ visitors ည့်သည်များနှင့်နေ့စဉ်စည်းလုံးမှု…
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လုပ်ငန်းခွင်စီမံကိန်းအစီရင်ခံစာ (Addendum) ၏စီစဉ်ထား UIP နှင့်အဘိတ်အဖြစ်ဧရိယာပါဝင်အတွက်ပုံGündüzbeyဘူတာဧရိယာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများအတွက်တူရကီပြည်နယ်ရထားလမ်းတွင် Bilecik Bozüyük
ပန်းခြံများ Pass ကိုနီးပါး Living Space ကိုဟု
Bursa Gürsuနယူး Market ကအာကာသနှင့်ကားရပ်ရန်ကြွလာ
TCDD သည် Marmaray ဝန်ကြီးဌာနစျေးဝယ်စင်တာဧရိယာအတွင်းရှိဧရိယာအသွင်ပြောင်းထားသည်
Uzunçayır IETT Peron ဧရိယာဝန်ဆောင်မှုထဲသို့